आठ होइन, १५ वटा मन्त्रालय दिए पनि नेपाली काँग्रेसका सरकारमा नजाने दाबी : पूर्व उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका पुराना नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आठ होइन, १५ वटा मन्त्रालय दिए पनि सरकारमा नजाने दाबी गरेका छन्। उनले ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताएका हुन्।
उनले सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर कुनै सम्झौता नगरेको बताए। श्रेष्ठले भने, ‘मैले मंगलबार सभापतिजीसँग भेटेर अन्तरंग कुराकानी नै गरेँ। र, मैले बुझेसम्म एउटा कुराचाहिँ के प्रस्ट हुनुस् भने अहिले ८वटा होइन, १५ वटा मन्त्रालय दिए पनि कांग्रेस सरकारमा जाँदैन। कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भनेर प्रस्ताव आयो भने छलफल गर्न सकिने कुरा हो।’
श्रेष्ठले काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रस्ताव आएको खण्डमा पछि नहट्ने बताए। उनले भ्रस्टाचारमा लिप्त सरकारमा सहभागी हुने कुरा सोच्न पनि नसकिने भन्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव आए सोच्न सकिने बताए।
श्रेष्ठले भने, ‘अहिले कांग्रेस सरकारमा जान आत्तिएको होइन। कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव आयो भने हामी अवश्य विचार गर्छौँ। अर्काको नेतृत्वमा त किन जाने र? अहिले यत्रो भ्रष्टाचार गरेको छ, अनियमितता छ।प्रशासन संयन्त्र असफल छ, यस्तो वेलामा त्यो फोहोरको दुर्गन्धमा किन फस्ने? उनीहरूले गरेको कर्तुत हामीले किन व्यहोर्ने र?’
श्रेष्ठले नेकपाले भोलीको दिनमा देश चलाउन सकेन भने काँग्रेसले देशलाई निकास दिलाउन सरकार चलाउने बताए। ‘अब भोलि उहाँहरूले साँच्चिकै देश चलाउन सक्नुभएन भने र कांग्रेसले एकलौटी सरकार चलाउन पायो भने त्यसवेलामा कांग्रेसले सोच्छ,’ उनले भने।
श्रेष्ठले नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट प्रचण्डलाई सरकारका कर्तुतहरुबारे बोलिदिएको भन्दै धन्यवाद दिए।